Ngaba uyafuna ukufumana i-30 yeedola ngokuzama i-Autodesk Topobase? -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ngaba ufuna ukufumana i-$ 30 yokuhlola i-Autodesk Topobase?
Iilebhu ze-AutoDesk zibonelela ngeedola ezingama-30 ukuvavanya ubuchule kunye nokusebenza kwe Topobase. Ukwenza oku, ukuba ulilungu labavavanyi be-Autodesk Beta kwaye ubeke iprofayile yakho onomdla wokwazi ngakumbi ngeTopobase, uyakufumana iidola ezingama-30 kwizatifikethi zezipho, ukuba akunjalo, uya kufumana ama-20 eedola kuphela kwabokuqala abangama-30 abanomdla wokuthumela isicelo njengo yintoni u-Ali Kather athi kwiblogi yakhe nangona olu vavanyo luza kuba ngokubanzi ngokubhekisele ekusebenzeni kweendawo ezinobuchule ezenzelwe i-AutoCAD ngo-2009.
Isiqingatha seyure sokuvavanya i-whims okanye i-novelties, akukubi ukuba ungasitshintshela isatifikethi seAmazon, ekunokwenzeka ukuba seso sixhobo sombane sikutyile iimpuku. Iimvavanyo ziya kuqhubeka phakathi kuka-Epreli 7 no-11, 2008.
1. Abasebenzisi be Topobase
2. Iingcali zeGIS
3. Abasebenzisi be-GIS
Iimvavanyo ziya kuba kude, ungathatha inxaxheba kwi-intanethi okanye ngefowuni. Amava nge Topobase ayifuneki kwaye iziphumo ziya kusingathwa ziyimfihlo.
Ukuba unomdla okanye ucinga ukuba kukho umntu, le yi-imeyile zonxibelelwano: alison.kather@autodesk.com
Izitimela ngexesha langempela ngeGPS